बारा जिल्लाको थारु गीत "पागल बना देलौ" को छायांकन समापन - Radio Tharuhat Your browser does not support the audio element.
बारा जिल्लामा बोलिने थारु भाषाको गीत “पागल बना देलौ” को म्यूजिक भिडियो छायांकन चितवनको रत्ननगरमा समापन गरिएको छ । रत्ननगर स्थित होटल स्टार ब्यान्क्यूटमा सेट बनाएर २ दिन सम्म छायांकन गरिएको थियो । चर्चित गायिका अनु चौधरी र बारा जिल्लामा उदाउदै गरेको नव-गायक आर्या चौधरीको आवाजमा रहेको गीतलाई हिरा चौधरीले निर्देशन गरेका छन् ।
मोडेल- मुस्कान चौधरी
बाराका विरु चौधरी र चितवनकी मुस्कान चौधरीको जोडदार अभिनय रहेको यो गीतलाई सन्तकुमार चौधरीले छायांकन गरेका हुन । कोसिष चौधरीको शव्द रहेको यो गीतलाई गणेश चौधरीले एरेन्ज गरेका छन् । ड्रिम्स स्टुडियो काठमाण्डौंमा यो गीत रेकर्ड गरिएको हो । गीतमा १२ जना स्थानीय थारु चेलीहरुलाई कोरसको रुपमा राखेर नचाईएको छ ।
मोडेल- बिरु चौधरी
यो गीतमा विक्रम चौधरी ( म्याड म्याक्स)ले ड्रोन अपरेट गरेका छन भने सहायक क्यामेरामा सन्ज चौधरीले काम गरेका छन् । अजय चौधरीले सहायक कोरियोग्राफी गरेको यो गीतले दर्शकको मन जित्न सक्ने निमार्ता निराजन थारुले बताए । यो गीतलाई निराजन थारु र सन्तोष शाहले निर्माण गर्न लागेको हो । गीतलाई दिपावलीकै अवसरमा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको निर्देशक हिरा चौधरीले बताए ।
गायक- आर्या चौधरी
गायिका- अन्नु चौधरी
Previous Post“तोर मायाक सागरमा” थारु गीतको भिडियो सार्वजनिक!
Next Postबारा जिल्लाको थारु गीत “पागल बना देलौ” को भिडियो सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)